बल्ल लाग्यो उमेरको टुंगो कत्ति बर्ष भए बुद्ध लामा ?
Home / भिडिओ / बल्ल लाग्यो उमेरको टुंगो कत्ति बर्ष भए बुद्ध लामा ?
बल्ल लाग्यो उमेरको टुंगो कत्ति बर्ष भए बुद्ध लामा ? 0
पोखरामा शनिबार नेपाल आइडल कन्सर्ट सम्पन्न भएको छ । कन्सर्टमा नेपाल आइडल विजेता बुद्ध लामासहित फस्ट रनरअप निशान भट्टराई, सेकेन्ड रनरअप प्रताप दाससँगै उत्कृष्ट १० मा परेकी सन्ध्या जोशीको प्रस्तुती रहेको थियो ।
नेपाल आइडलको ग्राण्ड फिनालेपछि राष्ट्रियस्तरमा कन्सर्ट भएको यो पहिलोपटक हो.पोखराका बुद्ध लामाका लागि पोखरामै कार्यक्रम हुदा समर्थक धेरै हुनु नौलो नहोला तर आज भएको कन्सर्टमा बुद्ध लामाको आगनमा कार्यक्रम भएपनि निशान भट्टराईको प्रस्तुतिमा दर्शक झुमेका थिए.
हेर्नुहोस नेपाल आइडलमा दोस्रो हुन् सफल निशानको प्रस्तुती
उत्तानो पारेर ग्वाम्म ग्वाम्म छिराउनु के हो ? गुलाफ होइन कण्डम बोक्ने
यीनै हुन 'ऐश्वर्य' रमेशको आँखामा परेकी नायीका (भिडियोहेर्नुहोस )